Maxkamad ku taalla Itoobiya oo xukuntay illaa 23 qof oo lala xiriirinayo Al-shabaab – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Maxkamad ku taalla Itoobiya oo xukuntay illaa 23 qof oo lala xiriirinayo Al-shabaab
Maxkamad sare ee federaalka Itoobiya ayaa min 15 sano xabsi ah ku xukuntay 23 qof oo lagu eedeeyay inay dalkaasi ka sameeyaan shabakad xiriir la leh Xarakada Al-shabaab.
Maxkamada ayaa eedaysanayaashaasi ku eedeysay in sidoo kale ay damacsanaayeen in falal argagixiso ah ay ka fulliyaan dalalka Bariga Afrika, gaar ahaan dalka Itoobiya.
Wakaaladda wararka ee xiriirka la leh dowladda Itoobiya ayaa maxkamada kasoo xigatay in seddax ka mid ah ragga la xukumay ay qorshaynayeen inay dowlad Islaami ah ka asaasaan gudaha dalkaasi Itoobiya islamarkaana ay falal argagaxiso ah ka fulliyaan halkaas.
Eedeysanayaashaasi ayaa la sheegay inay ahaayeen shabakad isku xiran oo ka howlgalaayay illaa lix magaalo oo ay ku jirto magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, intii u dhaxeeysay 2010-ka illaa 2014-ka.
Sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inay dagaalyahano ka qorayeen gudaha dalka Itoobiya, kadibne ay u dirayeen dalka Soomaaliya, si ay halkaasi ugu soo qaataan tababaro islamarkaana dib loogu soo celiyo dalka Itoobiya.
Dowladda Itoobiya ayaa kamid ah dalalka ku yaalla qaaradda Afrika oo ay dalka Soomaaliya ka joogaan ciidamo qeyb ka ah howlgalka Midowga Africa ee AMISOM, kuwaas oo dagaal xoogan kula jira dagaalyahanadda Al-shabaab.